Home YURUB IYO YURUB Sheekada Carruurnimada Boubakary Soumare iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold
LB wuxuu soo bandhigayaa Sheekada Kubadda Cagta isagoo ku naaneeso "Bouba". Waxay si buuxda u daboolaysaa Boubakary Soumare Childhood Sheeko, Taariikh nololeed, Waalid, xaqiiqooyin qoys, waaya-aragnimo nololeed hore iyo dhacdooyin kale oo caan ah isla xilligii uu ahaa Zero ilaa markii uu noqday Popular.
Bal eeg, Noloshii Hore iyo Sare u kaca Boubakary Soumare. Dhibcaha Sawirka: Lequipe, Twitter iyo Picuki
Haa, qof walbaa wuu ogyahay in kubad sameeyaha asal ahaan ka soo jeeda Senegal uu yahay kubadsameeye wacdaro ka dhex dhiga kubadsameeyaha, kaasoo barbar dhigay Paul Pogba Thanks to awooddiisa farsamo ahaan jireed iyo mid dhab ah. Si kastaba ha noqotee, kaliya tiro yar ayaa tixgelineysa noocayaga Boubakary Soumare's Biography oo aad u xiiso badan. Hadda bilaa camal dheeraad ah, aan bilawno.
Sheekada Carruurnimada Boubakary Soumare iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold - Nolosha Hore iyo Taariikhda Qoyska
Boubakary Soumare wuxuu ku dhashay maalintii 7aad ee bishii Feebaraayo 1999 waalidkiis waxay ku dhasheen Noisy-le-Sec, France. Hoos waxaa ku yaal sawirka Noisy-le-Sec, warmurtiyeed ku yaal xaafadaha bari ee Paris. Tani waa warmurtiyeedka (Dhawaq-le-Sec) halka ay qoyska Boubakary Soumare ku noolaayeen dhalashadiisa kahor iyo kadib dhalashadiisa.
Tani waa Noisy-le-Sec oo ay Boubakary Soumare Qoyska ka yimaadeen. Dhibcaha: Wikipedia
Ka fikirida muuqaalkiisa kore, waxaad soo jeedin kartaa waalidiinta Boubakary Soumare inay yihiin MA native saafi ah ee Faransiiska. Runtu waa, waxay asal ahaan ka soo jeedaan qoyskooda Senegal waxayna u badan yihiin inay yihiin muhaajiriin go'aansaday inay ka baxaan waddankooda si ay u degaan Faransiiska si ay ugu helaan fursado wanaagsan xubnaha qoyskooda.
Sida muhaajiriinta intooda badan, waalidiinta Boubakary Soumare waxay ku shaqeeyaan asalka qoyska dabaqadda dhexe. Si loo helo nolol, waxay inta badan safraan qiyaastii 8.6 km ilaa bartamaha magaalada Paris halkaas oo fursadaha shaqo buluug iyo caddaan ugu fiican ay jiifaan.
Nolosha Hore ee Boubakary Soumare: Sida laga soo xigtay FranceFootball, Boubakary Soumare wuxuu ku koray sidii a “Sulkier” (Qof caado u leh in uusan faraxsanayn). Wuxuu ahaa cunug qurux badan oo qurux badan MARNA KALIYA oo had iyo jeer waxaa laga heli lahaa geeskiisa yar (dabeecad saafi ah dabeecaddiisa noloshiisa hore ee caruurnimada).
Wax kasta oo ka mid ah, Boubakary Soumare wuxuu kaliya ku riyaaqay daqiiqado isboorti - taasi waa, daqiiqado markii uu ciyaaray kubbada cagta. Markuusan ciyaareynin kubada cagta, wiilka yari waxay u badan tahay in la helo isagoo cunaya cunnadiisa cuntada fudud - Hilibka Hilibka. Hoos waxaa ku yaal sawir nololeed naadir ah oo Boubakary Soumare isagoo sameynaya wixii uu ku yaqaanay sida ugu wanaagsan ee carruurnimada wax loogu qabto.
Nolosha Hore ee Boubakary Soumare- Muuqaal dhif ah oo ah isaga oo cunaya Hilibka Hilibka. Dhibcaha: Twitter
Sheekada Carruurnimada Boubakary Soumare iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold - Dhismaha Waxbarashada iyo Xirfadaha Shaqada
Markay ogaadeen inuusan ahayn ciyaalka bulsheed isla markaana ay aheyd kaliya kubada cagta inay sii socodsiiso inuu sii socdo, waalidiinta Boubakary Soumare waxay go'aansadeen inay u ogolaadaan wiilkooda inuu raaco aayahiisa (noqoshada kubbadda cagta) taas oo ay goor hore ku garteen. Ma ogeyd?… Saameyntii kalinnimadiisa waxay ku kalliftay dadaallada uu isagu isku riixayo inuu sameeyo waxyaabo aan caadi ahayn kubbadda.
Isaga oo si fiican wax u bartay ciyaarta wuxuu ku dhashay maskaxdiisa foosha xun, taas oo ka dhigtay Boubakary Soumare inuu gaaro wax alla wixii indhihiisa u galiyo kubbadda cagta. Markii uu ahaa ciyaariyahan kubada cagta ah, wuxuu ka horreeyay kuwa kale oo ka garab ciyaari jiray garoonnada maxalliga ah ee xaafadiisa.
Kadib guushii Faransiiska ee Koobkii Adduunka ee 2006, waalidiinta Boubakary Soumare ee kubbada cagta ku xeel dheer ayaa go’aansaday inay tahay inay wax ka qabtaan wiilkooda. Waxay go’aansadeen inay raadsadaan naadi ku dhow sidaas yar Bouba tijaabooyin qaadi kara. Boubakary Soumare oo 7 jir ahaa (in sanadkii 2006) wuxuu safray 23km isaga iyo waalidkiisna Dhawaq-le-Sec xaafada ilaa Voie des Saules halkaas oo uu tijaabooyin kula galay Paris FC.
Boubakary Soumare waalidkiis waxay kaxeysteen Noisy-le-Sec kuna sii jeedaan Voie des Saules si ay u xaadiraan tijaabooyinka. Dhibcaha: Google
Sheekada Carruurnimada Boubakary Soumare iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold - Nolosha Mudnaanta Hore
Daqiiqado gudahood ka dib markii lagu dhawaaqay inuu si tijaabo ah ugu guuleystay kooxda, farxadda xubnaha qoyska Boubakary Soumare ma aysan lahayn wax xad ah. Isla isla sannadkaas koobkii adduunka (2006), in yar oo Bouba ah (naaneysii uu dhalay) wuxuu ka qoran yahay baalasha akadeemiyadeed ee Paris FC (WAA PSG) oo aasaas wanaagsan u dhigay mustaqbalkiisa ciyaareed.
Bouba waxay ku deg degtay inay degto akadeemiyada Paris FC. Markii uu ku dhowaayey da 'yarta, wuxuu weli awoodi jiray inuu wax walba sameeyo - markastana wuxuu ka horreeyay kuwa kale intii uu ka ciyaarayay garoonka Paris ee Déjerine stadium.
Waqtigaas, Marc Moesta- tababarihiisa U12 iyo U13 ee Paris FC mar waxay ka marag fureen in Boubakary Soumare uu awoodo inuu waxyaabo heer sare ah sameeyo cimrigiisa yar. In kasta oo uu wali caado u lahaa in lagu sii haysto oo had iyo jeer laga helo geeskiisa. Xaqiiqdii, Bouba waxay ahayd nooca dhalinyarada kubbadda cagta ee ku raaxeystay kubbadda cagta wax yar shaqsi ahaan - waa calaamad saafi ah oo a Loner.
Sheekada Carruurnimada Boubakary Soumare iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold - Waddada loogu talagalay sheekada
In kasta oo xiddiga kor u kacayagu ku jiray U13, warkii xirfadiisa & kartidiisa ayaa durba bilaabay inuu ku faafo France oo dhan. Waqtigaas, waalidiinta Boubakary Soumare waxay go'aansadeen inay aqbalaan fikirka ah in wiilkooda ka tago Paris FC kuna biiro PSG halkaas oo uu ku maray tijaabin guul ah. Bouba wuxuu sii waday horumarka uu la gaaray PSG, isagoo ku biiray kuwa la mid ah Matteo Guendouzi kaasoo ka mid ahaa xiddigihii ugu fiicnaa ee kooxda PSG wakhtigaas.
Boubakary Soumare wuxuu ku bilaabay da'diisa U14s da'da PSG markii uu macalin u ahaa Sébastien Thierry kaasoo u arkay inuu yahay ciyaartoy si weyn u go'aamiya- dagaalyahan garoonka ah. In kasta oo la amaaney, walwal joogto ah ayaa ku yimid wiilka yar kadib qalin jabinta akadeemiyada. Ku ciyaarista Paris Saint-Germain B wuxuu la micno yahay inuu hoos ka dhacey kooxda waa weyn ee PSG, horumarkaas wuxuu umuuqday mid fantastik ah. Nasiib darrose, wiilka yar ayaa weli isku arkay hooska qadka dhexe ee PSG.
Bouba wuxuu sameeyay wax walba oo uu awoodo laakiin weli wuxuu ku hoos jiray hooska qadka dhexe ee PSG. Dhibcaha: footmercato iyo Twitter
Gelitaanka koox ka mid ah kooxda waa weyn ee PSG waxay la micno tahay inay ka sarreyaan wixii ay jecel yihiin Julian Draxler, Javier Pastore, Marco Verratti iyo Adrien Rabiot kuwaas oo dhammaantood ku jiray ugu sarreeya awoodooda. Isagoo sii koray bukaan-jiif dheeri ah isla markaana aan haysan wax ikhtiyaar ah, Boubakary Soumare wuxuu si lama filaan ah u diiday codsigii ahaa inuu qandaraas qandaraas ah u saxiixo PSG. Tani waxay siisay naadiyaal da 'yar oo badan fursad ay ku ugaadhsadaan oo ay ka baryaan saxiixiisa.
Sheekada Carruurnimada Boubakary Soumare iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold - Kusoo sharax sheekada
Naadiyada oo dhan, waxay ahayd Lille OSC oo fursadaas ka faa'iiday iyadoo uga mahadcelisay la-taliyaha isboortiga naadiga Luis Campo. Campo gacmihiisa ku helay hibada aadka loo jecel yahay xagaagii 2017. Markii hore, waxyaaboku uma socdaan sidii la filayay Boubakary Soumare madaama uu ka careysnaa inuu arko tababare Christophe Galtier oo ku dhejinaya nidaam 4-2-3-1 kaasoo ka tagaya labo boos kaliya. qadka dhexe. Kaliya laba boos oo khad dhexe ah ayaa ku baaqaya tartan weyn oo dhexmara qadka dhexe. Bouba hawshii ayey ku taagneyd.
In kasta oo arintii khiyaanada badhtanku ay joogsatay, qoyska Boubakary Soumare waxay kula taliyeen inuu u dulqaato horumarka isla markaana uusan waligiis ka noqonin qaadashada fursadaha soo socda. Sidii la filaayay, Bouba ma niyad jabin markii ay fursad iskeed u soo bandhigtay. Wuxuu saameyn badan ku yeeshay garoonka marka loo fiiriyo saaxiibkiisa kale Thiago Maia, oo isagu ka horreeyay isaga oo ka mid ah madaxda qadka dhexe ee beddelka.
Laakiin halkii uu burburin lahaa, xiddiga qadka dhexe wuxuu ka dhaqaaqay xoog ilaa xoog, isagoo gaadhay heer sareeya ee qadka dhexe ee dagaalka. Ilaa iyo hada, mid ka mid ah sifooyinka ugu muhiimsan ee Bouba waa marinkiisa cajiibka ah ee gudbinta, kaasoo u oggolaanaya inuu u caddeeyo waqtiga ciyaarta, inuu waxyaabaha ilaaliyaa khadka dhexe oo uu u beddelo ciyaarta si uu weerar ugu dhigo. Qaabka ciyaarta Boubakary Soumare wuxuu xusuusinayaa qof walba Paul Pogba [Hoos ka eeg oo naftaada xukun].
Bouba marki uu ahaa 20 jir waxkasta wuxuu kusameyn karaa khadka dhexe. Dhibcaha: Imago
Raaxo leh kubbada cagihiisa, Bouba wuxuu qaadan karaa baas ama waji gabax marka la eego qaabkiisii ​​si dagdag ah oo qallafsan- isaga oo ka dhigaya kuwa ka soo horjeedda inay la dagaallamaan. Xitaa haddii ay sameeyaan, markaa kama adkaan karaan isaga. Sifadaasi waxay keentay in naaneyskiisa “The New PogbaSababtoo ah Bouba wuxuu u eg yahay qaabkii ciyaartoyga Faransiiska ee dalkiisa ka caawiyay inay ku guuleystaan ​​Koobka Adduunka ee FIFA 2018.
Shaki la'aan, taageerayaasha kubada cagta ayaa qarka u saaran inay arkaan xitaa nooc ka fiican Paul Pogba Jidkiisa u ifisay hibo heer caalami ah isla markaaba indhahayaga hortooda. Boubakary Soumare runti waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican khadka dhexe ee wax soo saarka khadka dhexe ee qarnigiisa Faransiiska. Inta soo hartay, sida ay yiraahdeen, waa taariikh.
Sheekada Carruurnimada Boubakary Soumare iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold - Nolosha Xiriirka
Isaga oo kor u qaadaya caan isla markaana cinwaan uga dhigaya sida loo arkay wararka xanta ah ee Suuqa Kubadda Cagta Yurub (waqtiga qoraalka), waxaa iska cad in taageerayaashu ay bilaabeen inay ka fikiraan su'aalaha; Yaa ah Boubakary Soumare?â € | Ma leeyahay gabar saaxiib ah?. HAA !! Ma jiro wax dafiraya xaqiiqada ah in muuqaalkiisa caruusadda ee sida quruxda badan u egtahay oo ay weheliso sara u qaadis meteoric aanu isaga ka dhigaynin A-lister saaxiibbada suuragalka ah iyo xitaa waxyaabaha haweeneyda ah.
Waa kuma Boubakary Soumare Gabadha? - Taageerayaal badan ayaa weydiiyay. Sawirka Sawirka: Picuki iyo ScoutNationHD
Ka dib markii aannu saacado badan internetka ku isticmaalnay si aan u helno tilmaamo, waxaan ku soo gaba-gabaynay in Boubakary Soumare xilligii qoraalku u muuqdo inuu sameeyey dadaal aad u badan oo aan ku muujineynin saaxiibtiisa ama xaaskiisa.
Dhanka kale, waxay noqon laheyd in Bouba ay kaligeed tahay (wakhtiga qorista), bayaan muujinaya jiritaanka a WAG. LAAKIIN waad ogtahay sida kubada cagta aan loo cafin karin markii aan si sax ah wax looga qaban arrimaha xiriirka. Tani waxay noqon kartaa sabab uu isagu Bouba u lahaan kari waayo saaxiib ama xaas marka la qorayo.
Sheekada Carruurnimada Boubakary Soumare iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold - Naftaada Shaqsiga
Hadda waa waqtigeedii si looga jawaabo su'aasha dhabta ah ee sheegay- Waa kuma Boubakary Soumare?… Inaad barato Boubakary Soumare Nolosha Shaqsiyadeed ee garoonka ka baxsan waxay hubaal tahay inay kaa caawineyso inaad sawir wanaagsan ka hesho shakhsigiisa.
Waa kuma Boubakary Soumare? - Xaqiiqda Noloshiisa Shaqsiyadeed ayaa kaa caawin doonta inaad sawir wanaagsan ka hesho isaga. Dhibcaha: D-Express & Picuki
Bilaabista, Boubakary Soumare waa qof ku hadla wax yar oo waa inaad ku calaacashaa AMA samee wax aan caadi aheyn oo aan caadi aheyn si aad uga dhigto dhoola cadeyn. Sidoo kale, isagu wax cabsi ah ma qabo oo wuxuu yaqaan wixii uu doonayey tan iyo caruurnimadiisii. Markaad la hadlaysid Bouba, waa inaad toos toos ugu gaadhaa barta. Waa qof go’aansaday wuuna doonayaa inuu sida ugu macquulsan u kaco.
Qoraal kale oo ku saabsan nolosha shakhsi ahaaneed ee Boubakary Soumare waa caado u leh inuu diido dhammaan codsiyada wareysiyada (marka loo eego La Voix du Nord). Waqtiga qoraalka, isagu ma jecla inuu arko warbaahinta ku xeeran. Sida laga soo xigtay FranceFootball, Bouba ma aaminsana baahida loo qabo shabakad warbaahinta bulshada ah naftiisa. Qoyska Boubakary Soumare, saaxiibbada dhow iyo naadigu way ixtiraamaan rabitaankiisa miyir-qabka warbaahinta bulshada. Saaxiibbada, wuxuu aad ugu dhawaa saaxiibbadii kooxeed ee hore Nicolas Pepe. Labaduba waa sida reerka - runtiina, walaalo.
Marka saddexaad, Boubakary Soumare noloshiisa gaarka ah, sida ay ahayd inaad u aragtay, qofkiisii ​​oo dhan waxaa lagu soo koobay seddex erey- (qoyska, saaxiibbada, ama kubbadda cagta). Ma jiro nolol bulsheed waqtiga qoraalka. Marka wax aysan isaga ka farxin, waxay ku noqotaa isaga si sahlan isla markaana kama fikiro inuu cadho ku muujiyo garoonka dhexdiisa. Waa dhakhso in la ogaado goorta uu xanaaqsan yahay wax. Sida laga soo xigtay FranceFootball, waxa uu mar dhaleeceeyay markii uu u ciyaarayay daafaca dhexe intii uu joogay PSG.
Sheekada Carruurnimada Boubakary Soumare iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold - Nolosha Qoyska
Qeybtaan, waxaan kugu siineynaa macluumaad dheeri ah oo ku saabsan xubnaha qoyska Boubakary Soumare oo ka bilaabaya waalidkiis.
Bilaabidda, Boubaheena gaarka u ah waxay ka timid qoys jecel in la ixtiraamo oo ugu muhiimsan, ma jecla in la wargaliyo. Boubakary Soumare waalidkiis waxay siiyeen waxbarashadii loo baahnaa taas oo ka caawisay qaabeynta aragtidiisa guusha. Waxay ka dhigeen isaga si aad ugu xidhan xaafadiisii ​​uu ku barbaaray. Waqtigan xaadirka ah, hooyadiis iyo aabihiis labaduba waxay sameeyeen dadaal dheeri ah si looga fogaado warbaahinta.
Sidoo kale waqtiga qorista, Bouba wuxuu ka gaashaamaday walaalihiis, walaalihiis, adeeradiisa iyo adeerkiis inay u adeegsadaan inay ka dhex helaan warbaahinta Faransiiska iyo Ingiriiska. Dhammaan xubnaha qoyska waxay u badan tahay inay nolol wanaagsan ku noolaadaan Faransiiska oo maalin uun bay bixi doonaan, siinayaan wareysi habboon oo lala yeesho warbaahinta Faransiiska ama Ingiriiska. Waxa diirada la saarayo qof walba hada waa in la arkaa in Bouba uu kusii kordhayo kubada cagta.
Sheekada Carruurnimada Boubakary Soumare iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold - nololeedka
Kubbad sameeyaha casriga ahi wuxuu ku nool yahay qaab nololeed aan caadi ahayn, oo si fudud looga arki karo kooxo wata gawaarida qalaad, guryaha waaweyn (guryaha waaweyn) iyo labiska qaaliga ah. Tani, si kastaba ha noqotee, maahan kiiska Bouba sida uu yahay, sida laga soo xigtay dad badan oo isaga yaqaan, waxaa loo arkaa inay ka hortagaan qaab nololeed qalaad.
Bouba waxay ku nooshahay qaab nololeed abaabulan, mid aan lahayn qarash aan macquul ahayn- macnaheeda wuxuu ku hayaa baahiyo wax ku ool ah oo aan kharash badan ku fadhiyin. Ma jiro wax la mid ah isaga oo wata gawaarida qalaad ama muujiya naftiisa oo ku raaxeysanaya nolosha guriga weyn (guri nagaadi). Sawirka hoose wuxuu soo koobaya qaab nololeedka Boubakary Soumare. Runtu waxay tahay, wuxuu doorbidayaa inuu qaato basaska dadweynaha inkasta oo uu haysto lacag badan si uu ugu helo baabuur. Waxa kaliya ee aan aragnay isagoo fuushan waa baaskiil.
Hab-nololeedka Boubakary Soumare wuxuu shaaca ka qaaday inuu ogyahay farqiga u dhexeeya waxqabadka iyo raaxada. Dhibcaha: Picuki & Imago
Sheekada Carruurnimada Boubakary Soumare iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold - Xaqiiqooyin aan sax ahayn
naaneys: Waxaad u badan tahay inaad garatay inaan dhowr jeer u gudbinay isaga naaneyska "Bouba”Marar badan qoraalkaan. Ma ogeyd?… Boubakary Soumare wuxuu helay naaneyskiisii ​​labaad “Bougba"Tixraac inuu haysto Paul Pogba qaabka ciyaarta.
Diinta: Tdiinta ugu badan ee Senegal waa Islaam oo ka kooban 92% dadkeeda. Tani waxay tilmaan siinaysaa diinta Boubakary Soumare dhaqamada qoyska taas oo ah Islam. Waan kula soo socodsiin doonnaa isla marka ay jirto jiritaanka caddeyn sawir oo muujinaya dhaqankiisa diinta Islaamka.
Tattoo: Dhaqanka Tattoo wuxuu caan ka yahay adduunka isboortiga maanta. Ciyaartoyda kubada cagta badanaa waxay u isticmaalaan inay ku muujiyaan qofka diintiisa ama dadka ay jecel yihiin. Bouba waqtiga qoristu waa bilaash iyadoo aan lahayn wax kujira jirkiisa kore iyo hoose. Sawirkiisa noloshiisa shaqsiyeed ayaa wada dhaha.
Suurtogalnimada FIFA: Soumare wuxuu awood u leeyahay inuu noqdo mid ka mid ah xiddigaha qadka dhexe ee ugu fiican Faransiiska ee ku jira FIFA 20. Kubadsameeyaha la tartamaya wuxuu leeyahay qiimeyn suurtagal ah FIFA oo ka dhigeysa 87 taasoo ka dhigeysa inuu hubiyo inuu u iibsado kuwa jecel FIFA.
Boubakary Soumare Awoodaha FIFA Dhibcaha: Futhead iyo SoFIFA
Shaki la'aan, waxay noqon laheyd mid farxad leh in loo isticmaalo Boubakary Soumare qaabka xirfadeed ee FIFA. Bal qiyaas inaad iibsato 2020 oo aad aragto isagoo kor uga sii kacaya xitaa 87 kartiisa sannadka 2025.
Hantida FACT: Waad ku mahadsan tahay aqrintayada Boubakary Soumare Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Taariikh nololeed ee Untold Ugu LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxsanaan iyo cadaalad. Haddii aad hesho wax aan sax ahayn, fadlan nala wadaag adigoo faallo ka bixinaya xagga hoose. Waxaan markasta qiimeyn doonnaa oo xushmeyneynaa fikradahaaga.
Wareysiga Faransiiska Football
Sheekada Dhalashada Faransiiska Moussa Dembele Xaqiiqda Taariikh Nololeedka ee Untold
Issa Diop Story Plus Sheekooyinka Xaqiiqooyinka aan la isku qorin
YURUB IYO YURUB343
Presnel Kimpembe Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha
Olivier Giroud Sheekooyinka Hore ee Sheeko-xannuunsanaha
Raphael Varane Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir la'aanta
Samuel Umtiti Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha
Waxaa laga yaabaa 25, 2018